Ukushicilelwa kwedijithali kwi-Intanethi - iGoffused
Ngo-Okthobha, 2010 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Ukushicilela imiqulu emikhulu yephepha okanye umqulu, ukuprinta okuqhelekileyo kuyisisombululo kuphela. Ngokwengxenye kuba ukuhlukana kwemibala kunciphisa iindleko xa kuqhutyelwa ukuphrinta okukhulu; kodwa nge-disadvantage engenakwenziwa ngokukhawuleza kwaye kwimiqulu emincinci ayiphumeli.
Printia yinkampani ephakama ukubonelela ngeenkonzo Ukushicilelwa kweDigital eMadrid ngenxa yeenkampani ezifuna imiqulu emincinci kwaye zikulindele ukuba zenze kwintuthuzelo yeofisi yazo. Leyo yimeko yinto enokufunwa kwisiganeko, apho ubugcisa buye busebenza kodwa amakhadi, iiphamflethi kunye neeCD zokubonisa kufuneka zenziwe kwakhona.
Kule nto nangaphezulu nguPrintia. Makhe sibone oko kuvela kwinkonzo yakho:
Inkonzo yakho isebenza kwiqonga lesitolo sevini, apho ufuna kuphela ukulandela amanyathelo; ukusuka ekukhetheni uhlobo lwenkonzo, ukulayishwa kwefayili kunye nentlawulo yekhompyutha.
Uhlobo lweenkonzo luyintetho, iindidi eziqhelekileyo kodwa ngaphakathi kwindlela enye eyahlukileyo isetyenziselwa ubukhulu bezinto ezilindelekileyo:
Iikhathalogu / iimagazini
Uncedisa amafomathi amaninzi
Iifayile kufuneka zilayishwe ngokuxinzezelekayo (zip), ngokukhethekileyo kwi-pdf, kodwa inkonzo isekela phantse nayiphi na ifomathi esetyenziswa ngokuqhelekileyo:
Imifanekiso, iifayile ze vector zeCorel Dweba / Ipeyinti yeSithombe, i-Adobe Illustrator / Freehand. Emva koko bayamkela iMicrosoft Word, uMshicileli kunye nePowerpoint.
Kucetyiswa ukuba ubuyekeze imigaqo-siseko, njenge-resolution image ephezulu kune-300 ppp kunye ne-palette ye-CMYK. Banikezela ngoncedo xa kunenkxalabo kunye nale nqobo yemingcipheko okanye imithombo ekhoyo.
Zonke ngaphandle kokushiya idesksi
Nangona inkampani ikhona iminyaka emininzi edlulileyo, ukuxhuma kwi-Intanethi kwakufanele kucingwe kakuhle. Yaye yileyo, akukho nto ingcono ukusuka kwidesi ukuyalela umyalelo, hlawula i-intanethi kwaye ulindele ukuba ifike ngaphandle kwebala elikhulu. UPrintia usebenza eSpanish, kuquka neeBalaaric neCanary Islands.
Ngoko, ukuba oko ukhangeleyo kukuprinta kweDivayili; Printia Isisombululo esikhulu.
Post edlulileyo«Edlulileyo Yiyiphi iBentley ezisa i-Inspired
Post Next UMSEBENZI WAMAGAMAOkulandelayo "
Enye Impendulo "Ukunyathelisa nge-digital"
Ukudibanisa amakhadi ezoshishino (kunye namakhadi eshishini aseStro kunye ne-UVI) http://www.tarjetascolor.com